Seagate Wireless Plus 1TB WiFi Drive Review (I): Hardware | Vaovao IPhone
Andro vitsy lasa izay dia nilaza taminareo momba ity kapila mafy ity aho. Efa ela aho no nitady ny iray amin'ireo kapila WiFi ireo mba hanitarana ny fahafahan'ny iPad 3 ho 16GB fotsiny (hadisoana lehibe tokoa izany). Rehefa nahita ny Seagate Wireless Plus aho dia nandefa ny tenako tsy nieritreritra, satria raha namoaka ny zavatra rehetra nampanantenainy izy dia tonga lafatra amin'izay notadiaviko. Ary tsy maintsy lazaiko fa, rehefa avy nanandrana izany dia saika tonga lafatra sy tena atolotra azy. raha mitady hanitatra ny fahafaha-mitahiry ny fitaovanao ianao. Te-hanao famerenana amin'ny antsipiriany araka izay azo atao aho, satria mendrika azy io fitaovana io, ary izany no antony hizarako azy ho roa: fitaovana (ilay fitaovana mihitsy) sy rindrambaiko (ny fampiharana hampiasana azy).
2 Fihetseham-po voalohany
Mifanaraka amin'ny Mac sy Windows. Manohana ny NTFS sy HFS +
Lanja: 256gr refy: 127x89x19,9 (cm)
Fifandraisana: WiFi + USB 3.0
Fahaleovan-tena: 10 ora noho ny batterie anatiny
Inona no ao anaty boaty: kapila mafy, tariby USB 3.0, adaptatera USB 3.0, tariby famandrihana USB, charger USB multi-pin (Espana, Etazonia ary ny hafa)
Ny zavatra voalohany tsy ampoizina rehefa mahita ilay kapila ianao ary mitazona azy eny am-pelatananao dia ny habeny sy ny lanjany.. Izy io dia zara raha lehibe noho ny 1TB LaCie Rikiki, iray amin'ireo mpamily ivelany 1TB kely kokoa (tavela eo amin'ny sary). Miorina tsara izy io, na dia vita amin'ny plastika aza. Ny fonony ambony dia loko volondavenona izay mitovy amin'ny vy, ary ny sisiny sy ambany dia plastika malemilemy, miaraka amina fehikibo kely efatra hanohanana azy eo ambony latabatra.
Tsy dia afaka mahita LED kely roa ianao manondro ny fiasan'ny (maitso) sy ny tamba-jotra WiFi miasa (manga). Eo amin'ny sisiny no ahitantsika ny bokotra herinaratra, malina tokoa. Tsy hahita fifandraisana hafa ianao Afa-tsy ny fidirana kely ho an'ny tariby charger dia tsy dia misy mampiavaka azy.
Satria miafina amin'ny fonony ny fifandraisana USB. Raha te hampifandray ny tariby USB 3.0 dia mila esorinao ilay fonony ary apetraho ny adaptatera ahafahana mampifandray ilay tariby.
Io ihany no teboka ratsy hitako amin'ny fitaovana. Tiako kokoa ny fifandraisana microUSB tsotra mba hamandrihana sy hampifandray ny tariby USB, na dia tsy maintsy nanao sorona USB 3.0 aza aho. Fa ity rafitra ity dia tena fahita any amin'ny fiara Seagate.
Ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra WiFi novokarin'ny kapila dia tena tsotra, toy ny WiFi rehetra. Raha tsy izany dia tsy voaro ianao, fa azonao atao ny mametraka teny miafina aminy, na manova ny anaran'ny tamba-jotra aza.
Mamela ny fitaovana mampifandray fitaovana 8 samihafa miarakaNa dia 3 fotsiny aza no afaka milalao atiny HD hafa miaraka, mihoatra ny ampy amin'ny ankamaroan'ny tarehin-javatra.
Amin'ny ampahany manaraka amin'ny famerenana dia hazavaiko ny fizotran'ny fampifanarahana amin'ny solosaina sy ny fampiasana ny rindranasa ho an'ny iOS hahafahana mamerina ny atiny.
Fanazavana fanampiny - Seagate Wireless Plus: habaka 1TB ho an'ny fitaovanao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Seagate Wireless Plus 1TB WiFi Drive Review (I): Hardware
Ohatrinona ny vidin'ity??
Valiny tamin'i Sel
Izany dia miankina amin'ny tranokala sy ny andro. Tamin'ny amazona dia hitako nitovy tamin'ny € 250 mihoatra ny € 180 (ny vidiny nividianako azy)
Novakiako tao amin'ny gizmodo fa tapaka tsy tapaka ianao, sa tsy izany?
Xfirio dia hoy izy:
Tena mahasosotra tokoa ny ampitanao amin'ny alalàn'ny USB ny mombamomba anao ary tapaka foana ny fotoana
Mamaly an'i Xfirio
Efa nandany horonantsary maherin'ny 200GB aho ary tsy nifandray tamin'ny fotoana rehetra. Ary efa nahita fizarana andian-dahatsoratra maro tamin'ny iPad Mini-ko ary tonga lafatra ny zava-drehetra, tafiditra ao anaty dikanteny.
Marina fa indraindray, rehefa ela nifandray nefa tsy nampiasa azy dia tsy maintsy namono ary namono ilay kapila mafy mba hahafahana mifandray indray, saingy indroa ihany izy no nitranga, ary aorian'ny adiny iray mahery nefa tsy nampiasa azy io.
Abela aubone dia hoy izy:
Izay hitako fa mora kokoa dia ao amin'ny tranokalan'ny APP http://www.appinformatica.com/discos-duros-externos-seagate.-1tb-2.5-wireless-plus-wi-fi-usb-3.0.php
Valiny tamin'i Abel Aubone
Fernando Gomez Corrales dia hoy izy:
Manana ny maodely GoFlex Satellite teo aloha aho ary mahavariana ... ampifandraisina amin'ny xbmc dia tsy mila ilay application ianao ... ary ho hitanao milamina sy tsy misy jerks ny Mkv
Valiny tamin'i Fernando Gómez Corrales
AZA AZA ATAO AZA AZA ATAO, SATRIA IZAKO FA TSY MISY FAHAMARINAN-DALANA, ilaina ve ny mampifandray ny IPAD amin'ny zoro mba hanana WIFI AIZA? SA MAMORATRA IPAD SY SAMBATRA SAMBATRA IZANY ARY TSY ilaina ary azo ampiasaina na aiza na aiza? MISAOTRA ANAO
Azonao atao ny mamorona tambajotra anao manokana
Mampalahelo fa tena mahantra ny famakafakana ataonao ary manohana ny mpanamboatra azy tokoa aho, azoko antoka fa amin'izao fotoana izao (7 volana na mihoatra ny hafatra farany nataonao) ny kapila ivelany dia efa niatrika olana lehibe, ary ny ahy tsy miasa intsony ary afaka ianao tsy fidirana amin'ny lafiny rehetra, mety misy lesoka amin'ny orinasa izy io ary raha manana lahatsoratra manohana ny teôria na fahalalana momba azy aho dia tiako hampahafantarinao ahy.
Raha nanana fanandramana ratsy niaraka tamin'io ianao dia miala tsiny indrindra, fa ny famakafakana nataoko dia toy ny nitsapana ilay lahatsoratra ihany aho. Amin'izao fotoana izao dia tsy eo an-tanako io ka tsy azoko lazaina aminao ny fomba fiasan'izy io. Raha tsy mahomby dia ny mankany amin'ny serivisy teknika no tokony hataonao satria mbola eo ambany fiantohana izany.
Hevitra iPhone 6 vaovao misy efijery miolaka
Durex dia mamorona vibrator fehezin'ny iPhone